एन्ड्रोइड वान स्मार्टफोन जीएम ५ प्लस नेपाली बजारमा, यस्ता छन् विशेषता
काठमाडौं । टर्किश मोबाईल ब्रान्ड जनरल मोबाईलको जिएम ५ प्लस एन्ड्रोइड वान स्मार्टफोन नेपालमा सार्वजनिक भएको छ ।
टर्किश मोबाईल कम्पनी जनरल मोबाईलले गुगलको एन्ड्रोइड वान अभियानसँग सहकार्य गरेर निमार्ण गरेको नयाँ एन्ड्रोइड वान डिभाइस जिएम ५ प्लस नामक मोबाईल फोन नेपालमा ठूलो पसल प्रालिले भित्र्याएको हो ।
कम्पनीले यस स्मार्टफोनले एन्ड्रोइडमा नयाँ अपडेट चाहने ग्याजेटप्रेमी उपभोक्ताहरुको मन जित्ने विश्वास गरेको छ । अप्रिल ४ बाट बिक्रि सुरु गरिने यस मोबाईल फोनको मुल्य २४ हजार ९ सय ९९ रहेको छ । यसलाई कम्पनीको वेवसाइट www.thulo.com मा गएर प्रि–अर्डर पनि गर्न सकिन्छ ।
के हो त एन्ड्रोइड वान मोबाईल फोन ?
तपाई एन्ड्रोइड वान फोन भनेको के हो भनेर सोच्दैहुनुहुन्छ होला । खासमा एन्ड्रोइड वान गुगलले सन् २०१४ देखि सुरु गरेको एक कार्यक्रम हो जसले सस्तो मुल्यमा धेरै राम्रो गुणस्तरको मोबाईल फोन उपभोक्ता सामु पुर्याँउछ ।
एन्ड्रोइड वान गुगलतको एक हार्डवेयर र सफ्टवेयर स्ट्याण्डर्ड हो जसलाई गुगलले विकाशसिल देशका उपभोक्तालाई लक्षित गरेर विकास गरेको छ । एन्ड्रोइड वान स्मार्टफोन कम बजेट भएका उपभोक्तालाई लक्षित गरेर निमार्ण गरिएको हुन्छ । तपाईले एन्ड्रोइड वान डिभाइसमा साच्चै नै गुगलको स्ट्यान्डर्डको उत्कृष्ट हार्डवेयर र सफ्टवेयरको साथमा राम्रो कनेक्टिभिटि पनि पाउन सक्नुहुन्छ ।
के के विशेषता छन् त जिएम ५ प्लस मोबाईल फोनमा ?
जिएम ५ प्लस एन्ड्रोइड वान स्मार्टफोन मध्ये एक प्रिमियम मोबाईल फोन हो । पहिलेका एन्ड्रोइड वान स्मार्टफोनहरुमा थोरै विशेषता र कम गुणस्तरको हार्डवेयर हुने गर्थ्यो तर, यस पटक भने जनरल मोबाईलले यसमा यसमा बाजी मारेको छ । जनरल मोबाईलले कम मुल्यमा धेरै विशेषता सहित उत्कृष्ट डिजाइनमा यो एन्ड्रोइड वान डिभाइस बजारमा ल्याएको छ ।
डिस्प्ले– ५ इन्चको फुल एचडी गोरिल्ला ग्लास
चिपसेट– क्वालकोम एमएसएम ८९५३ स्नापड्रागन ६१७
सिपियु– १.५ गिगाहर्जको अक्टाकोर प्रोसेसर
स्टोरेज– ३२ जिबी इन्टरनल स्टोरेज सहित १२८ जिबी थप्न सकिने
अपरेटिङ सिस्टम– एन्ड्रोइड ७.० नौगट
क्यामेरा– १३ मेगापिक्सेलको डुअल लेड फ्यास सहितको रियर क्यामेरा र १३ मेगापिक्सेलको अटोफोकस, सेल्फी फ्ल्यास सहितको फ्रन्ट क्यामेरा
बेट्री– ३१०० एमएएचको नन रिमोभेवल बेट्री
कनेक्टीभिटी– डुअल सिम सहितको ४.५ एलटिइए क्याट ७ मोडेम टेक्नोलोजी